မြန်မာ့အဖိုးတန် သယံဇာတများ တရားမဝင် ခိုးထုတ်နေသော KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များ၏ စခန? - Yangon Media Group
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက လိုလားတောင့်တလျက်ရှိသည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို လျစ်လျူရှုကာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်တပ်မ တော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်များကို ဆန့်ကျင်လျက် ကချင်ပြည် နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာ့အဖိုးတန်သယံဇာတများအား တရားမဝင်ခိုးထုတ် ခြင်း၊ ခရီးသွားပြည်သူများအား ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့် အများပြည်သူသွားလာ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ကုန်စည်စီးဆင်း မှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများတွင် မိုင်းထောင်ခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများအား သတ်မှတ်နယ်မြေ ကျော်လွန်၍ လက်နက်ကိုင်ဆောင်သွားလာခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂေဟစနစ်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် အကြောင်းကြားထားသည့်အပြင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ တပ်မတော်က ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုတင် သွင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်း KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် နယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့်တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ခြင်းများအပါ အဝင်အထက်ဖော်ပြပါ အဖျက်အမှောင့်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖိုးတန်သယံဇာတများ တရားမဝင်ခိုးထုတ် ခြင်းများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအပြင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်နှင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တို့တွင် တနိုင်းမြို့နယ်၊ ရှဒူဇွပ်ကျေးရွာရှိ နယ်မြေခံနောက်တန်းဌာနချုပ်သို့ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များအသုံးပြု၍ လာရောက်တိုက် ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်လာခဲ့သည်။
KIA အကြမ်းဖက်သောင်း ကျန်းသူများသည် ခရီးသွားပြည်သူများထံမှလည်း ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်းများနှင့် အများပြည်သူများသွားလာအသုံးပြုနေသည့် လမ်း ကြောင်းများပေါ်၌ မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ဝ ရက်မှ ယနေ့အထိ တနိုင်းဒေသရှိ မိုးကောင်း-ကာမိုင်း-ဖားကန့်သွားလမ်းကြောင်း ပေါ်၌ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှုခုနစ်ကြိမ်၊ မိုးကောင်း-လဝါး-တနိုင်း လမ်းကြောင်းပေါ်၌ ဆက်ကြေး ကောက်ခံမှုငါးကြိမ်ရှိပြီး မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲမှု ၄၂ ကြိမ်ရှိကာ ခရီးသွားပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံ တော်၏ သယံဇာတများအား တရားမဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲနေမှုများကို စောင့်ရှောက်ကာ ကွယ်လျက်ရှိရာတွင်လည်း တနိုင်း ဒေသ၌ အဆိုပါကာလအတွင်း တရားမဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွှေတူးဖော်ခြင်း၊ ပယင်းတူးဖော်ခြင်း နှင့် အဖိုးတန်သစ်များခိုးယူထုတ် လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဘက်ဟိုးယာဉ် ၉၄ စီး၊ မြေသယ်ယာဉ် ၁၂ စီး၊ ၁ဝ ဘီးယာဉ်တစ်စီး၊ ဆီသယ်ယာဉ်နှစ်စီးနှင့် ရွှေဖောင် ၁၆ ဖောင်တို့အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့် တပ်မတော်မှ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသဖြင့် နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများလုံ ခြုံအေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်စေရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုမရှိ စေရေးတို့အတွက် တနိုင်းဒေသအတွင်း နယ်မြေရှင်းလင်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာထိတွေ့မှု ၁ဝ ကြိမ်၊ မိုင်းဖြစ်စဉ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ အကောက်ခွန်ဂိတ်တစ်ခု၊ စခန်းငယ်တစ်ခုနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်များတွင် ရန်သူတချို့သေဆုံး ခဲ့ကြောင်းနှင့် မိမိတပ်မတော်မှစစ်သည်တချို့ကျဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ တပ်မတော်မှနယ်မြေရှင်းလင်း ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အေတီအမ် စက်များကို Hack လုပ်၍ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် သတိပြုရန် လုံခြုံရေး သတင်း??
အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ရက်စက်သည့် သံသရာစက်ဝန်းမှ ရုန်းထွက်၍ မရသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စ??
အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်ကို ကုလသမဂ္ဂတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဟု ထရန်??
ဂျာမနီအသင်းနှင့် အတူ ကမ္ဘာ့ဖလား ကစားခွင့်ရရန် မာကိုရူးစ် ရည်မှန်း